Warraaqsa Barattoota Itoophiyaa Kan Durii fi Ammaa - Raabbiirraa Oromiyaa
March 1 2019 , Written by Raabbiirraa Oromiyaa
Waggoota darban muraasa keessa barattoonni yunivarsitoota Itoophiyaa adda addaa keessatti argaman mormii siyaasaa fi sochiilee bal'aa gaggeessa turaniiru. Barattoonni itti cichanii sagalee uumatasaanii dhageesisaniiru.
Sabaab waldhabuun mooraa yuuniversitoota Itoophiyaa keesatti rakkoo isa hammaataadha.
Sababa waldhabdee yuuniversitii keesatti uumamuutiin lubbuun barattoota hedduu darbeera.
Baruma kanallee nageenyasaaniif kan sodaatan barattoonni yunivarsitoota nannoo isaanitiin alatti argaman hin deemnu jechaa turan.
Akkasumas maatiin ijoolleesaanii gara yunivarsitootaatti erguuf boonaa osoo hin taanee yaaddoon gaggeessaa jiru. Kanneen yaaddoonni itti cimnaan barattoota isaanii hambisaniilleen manni yaa lakkaa'u.
''Yunivarsitiin maal saatu yunivarsitii ta'ee?''
Hirmaataa sochii barattoota baroota 1960 kan turan Dr Yeras Warqi Adimaase, yunivarsitii Finfinneetti waggoota 36'f waan barsiisaniif, gaaffiiwwan siyaasaa barattootaa fi sochiilee isaanii hubachuuf itti dhiheenya qabu.
Gaaffiin barattootaa bara isaanii ''lafti qotee buulaaf'' jedhuufi gaaffii fi sochiin barattoota bara kanaa baayyee garaa garummaa qaba.
Yeroo sana barattoonni kan mormanii fi kan irratti wal ta'an sirnnicharratti ture kan jedhan Dr Yeraas Warqi, tokkummaanii fi waliin dhaabbachuun mallattoo barattoota bara isaanii akka ture yaadatu.
''Odaan waraqaa eenyummaa keenyarra jiru dararaaf nu saaxile''
Kan ammaa garuu, ''bartttoonni sanyiin adda walqooduun yeroo tokko tokkoos amataanilee wal hiiruun ni mul'ata'' jedhu.
Waggoota darban kurnan keessatti mormii fi jeequmsa yunivarsitoota keessatti taasifamaniin wal qabatee qabeenyaawwan yunivarsitii hedduun miidhaaf saaxilamaniiru.
Bara isaanitti barattoonni alatti poolisoota waliin walitti haa bu'an malee dallaa yunivarsitt irraan illeen miidhaa hingahan ture. Yunivarsitoota reebuun gonkumaa kan hinyaadamne kan jedhan hayyuun kun, ''sirriiyyu yunivarsitiin dahoo fi kaampii sochii ture'' jedhaniiru.
Haallii fi amalli qabsoo barattoota bara kanaas kan bara isaaniin adda ta'uu fakkeenyawwan kaasuun dubbatu.
Barataan kutaa kutaabaa keessa ta'ee qo'atu duubaanan rukutamaa laata jedhee kan yaadda'u yoo ta'e, kutaa cisichaatti wal sodaachuun irriiba malee alkan kan dabarsn yoo ta'e, barattoonni shamarranii ni gudeedamnaa laata jechuun ka yaadda'an yoo ta'e, ''kun maal isaatu yunivarsitiidha?'' jedhu.
Jechi yunivarsitii jedhu mataansaa jecha Ingiliiffaa 'universal' jedhu irraa kan dhufee fi kan kallattii ilaalcha namootaa gabbisuu fi haalawwan bal'isee kan ilaalu yoo ta'u, yeroo ammaa garuu dhimmoota amantaa fi sabaan wal qoollifachuun heddummaatee carraan yyuniversitii utuu hin argamin hafaa jira jedhu.
Barataan haala akkanaa keessatti kufuun waan nama ajaayibu miti kan jedhan namoonni kunneen haaluma qabatamaa siyaasa biyyattiitu mooraa yuuniversitii keessattilee mul'ataa jira jedhu.
Obbo Baqqalaa Garbaa eenyuu?
Isaaniifi barattoonni yeroo sanaa turan wayita qabsaa'aa turan haala qabatamaa addunyaarrattti hundaa'uuni. ''Tarii yeroo sana waa'ee haala qabatamaa idil addunyaarratti hundaa'aa kan turre utuu amma ta'ees waanuma ijoolleen ammaa godhan kana goona.'' jedhan.
Warraaqsii fi komiin barataa ukkaamfamuu qaba otoo hin taane kan jajjabeeffamuu qabuudha kan jedhan Dr. Yaraasworqi garuummoo haalli warraasa barataa yeroo ammaa daandiisaa waan gadi dhiiseef sirrachuutu irra jira jedhan.
"Barataa Yuuniversitii yeroo sanaa fi ammaa waldorgomsiisuun ni cima"
Dhimma Warraaqsa Itiyoophiyaa keessa turerratti kitaaba kan barreessan hirmaataan warraaqsa barattoota Itoophiyaa duraanii Gabruu Taarraqee baayina barattootaa, haalli biyyaa fi addunyaa dafee dafee jijjiiramuun fi haalonni biroon barattoota yeroosaanii fi kana ammaa waldorgomsiisuun ni cimata jedhan.
Isaaniif walitti michoomanii adda bababyiitti bahanii warraaqsa kaasuun salphaa ture. Barataan falaasama 'Maarkisiizim-Leeniniizim' hordofaa ture jedhu Dr. Gabruun.
''Kaayyoo gooroon keenya Itoophiyaa guddate arguudha.Jiruun qonnaan bulaa fi warreen jireenya gadi aanaa jiraatanii akka fooyya'uuf qabsaa'aa turre''
Akkasaan jedhanitti sirni federaalizimii sabarratti bu'uureffatee Itoophiyaa keessatti amma hojiirra oolaa jiru dhiibbaa gudda fideera.
Waggoota darban keessa mootummaan ADWUI dabi siyaasi inni barattoota irrati dalage dhiibbaa mataasaa qaba jedhu.
"Yeroo sana siyaasi daldala hin turre"
Dura Taa'aan Paartii Kongireesii Federaalistii Oromoo Pirofeesar Mararaa Guddinaa barattoonni dhaloota bara 1960ootaa ta'an waan lamaan kanneen ammaarraa adda ta'u jedhu.
Tokkoffaa, tokkummaan yeroo sana ture hafee hinumaa barattoonni dubbii ijoo walitti isaan gurmeessurratti mariyachuu dhabuun qormaata cimaadha jedhan.
Lammaffaa yeroo isaan barachaa turan barattoonni kan dhaaba siyaasaatti seenaniif qabsoodhaaf malee faayidaadhaaf miti, amma garuu bu'aarratti kan hundaa'eedha jedhu.
Dr. Mararaa Guddinaa hiikaman
''Siyaasni akka har'aa gara daldalaatti hin geeddarmne ture. Lafti qonnaan bulaaf kan jedhuu fi walqixxummaan sabootaa gaaffii ijoo turan. Yeroo sana gaaffiin eenyummaa hunda biratti fudhatama qaba ture. Mootummaas ta'e qaamni kamiyyuu kan barbaachisuuf kaayyoodhaaf malee faayidaa addaatiif hin turre''
Mooraa yuuniversitii keessatti qofa osoo hin taane akkuma Itoophiyaatti badiin ADWUI siyaasaan daldalaa turuusaati jedhu Pirofeesar Mararaan
Ministira muummee Dr. Abiy Ahimad,irraa maaltu eegamaa?